Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Jet Airways 2.0: Diyaaradda Cusub
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • Investments • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Jet Airways oo mar kale dhalatay
War kasta oo wanaagsan oo ku saabsan dhinaca duulista hawada ee Hindiya wuxuu ku baaqayaa dabaaldeg. Markaa, hadalka dib -u -soo -noolaynta Jet Airways ka dib markii ay baalasheeda laalaabtay sidii bishii Abriil 2019, ayaa loo arkaa inay tahay calaamad wanaagsan oo aad loo soo dhaweeyey.
Qaabka cusub ee diyaaraddu wuxuu ku socdaa waddo soo -nooleyn iyada oo loo marayo kicitaan.
Jet Airways -kii asalka ahaa wuxuu saldhiggiisu ahaa Mumbai, dib -u -dhalashaduna waxay ku arki doontaa saldhigeeda New Delhi.
Waxay raadinaysaa inay bilawdo hawlo gaagaaban oo caalami ah oo sidaha sideeda labaad ee sannadka soo socda iyadoo ay suurtogal tahay duulimaadyada caalamiga ah goor dambe.
Astaamaha cusub - ama dib -u -dhalashada - ayaa dhici kara isla marka la gaaro horaanta sanadka soo socda, 2022, in kasta oo lagu qiyaaso qiyaas yar.
Qaabka cusub ee diyaaradda ayaa ku socda waddo kale oo aan hore loo tijaabin. jet Airways, mar magac xoog leh oo la ixtiraamo, ayaa cirka u mari doona waddada kicinta ee soo nooleynta.
Markii hore waxay ahaan doontaa side gudaha kaliya laakiin dabayaaqada sannadka dambe, Jet Airways 2.0 ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u duusho dibadda. Maamulka cusubi ma uusan sheegin faahfaahinta qorshayaasha hawlgallada caalamiga ah, hase yeeshee, ilaha warshaduhu waxay tilmaameen in diyaaradda laga yaabo inay eegto qaybta Khaliijka si dib loogu bilaabo
Inkastoo asalka Jet Airways wuxuu saldhigeedu ahaa Mumbai, dib -u -dhalashadu waxay ku arki doontaa iyada oo saldhigeedu yahay New Delhi. Waxay sii ahaan doontaa joogitaan xooggan oo muhiim ah Mumbai sidoo kale, saldhiggeedii hore.
Qaabka lahaanshaha ayaa sidoo kale ka duwanaan doona. Naresh Goet ayaa ahaan jiray kii soo wacay rasaasta, laakiin hadda dallad uu hoggaaminayo ganacsade Hindi ah oo fadhigiisu yahay UAE, Murari Lal Jalan, ayaa ku jiri doona kursiga diyaaradda. Jalan, oo hoggaamiya Jalan Kalrock Consortium (JKC) waxay heshay diyaaraddii Hindiya ee Jet Airways.
Sarkaalka ugu sarreeya ayaa sheegay in shirkaddu ay doonayso in ay bilawdo hawlo caalami ah oo gaagaaban markabkan qaybta labaad ee sannadka dambe.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in markii hore, hay'addan cusub ay yeelan doonto 50 diyaaradood muddo 3 sano gudahood ah, iyadoo la filayo in tirada ay sii kororto 100 sano gudahood 5 sano gudahood.
Haddii qorshahan la hirgeliyo, xaashiyaha iyo ganacsataduba aad bay u farxi doonaan waxayna si aad ah u daawan doonaan horumarka diyaaradda dib u dhalatay.
Ballaarinta awoodda hawada ayaa noqon doonta horumar aad u weyn, gaar ahaan maadaama kala -furidda Air India ay weli qaadanayso waqti dheeraad ah.
Shirkaddu waxay sheegtay inay durba shaqaalaysiisay in ka badan 150 shaqaale waqti-buuxa ah waxayna doonaysaa inay saarto 1,000 shaqaale kale sannad-maaliyadeedkaan. Shaqaalayntu waxay noqon doontaa mid waji leh waxayna noqon doontaa mid ka kooban qaybaha.